Isdiiwaan gelinta iyo araaji qabashada musharixiinta Puntland oo gabo gabo ku dhow • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Isdiiwaan gelinta iyo araaji qabashada musharixiinta Puntland oo gabo gabo ku dhow
Isdiiwaan gelinta iyo araaji qabashada musharixiinta Puntland oo gabo gabo ku dhow
Sida qorshuhu uu yahay gelinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gaba gabeeyo diiwaan gelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland.
Gudiga doorashada madaxweynaha iyo kuxigeenka Puntland oo shalay soo saaray shuruudaha laga rabo musharixiinta Puntland ayaa sheegay in 6 bisha oo maanta ku beegan saacaduna ay tahay 4:00 galabnimo lasoo afmeerayo diiwaan gelinta iyo araaji qabashada musharixiinta u taagan doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa Puntland.
Gudiga oo wada araaji qabashada musharixiinta ayaa maanta diiwaan geliyay in kabadan 20 musharax kuwaas oo u taagan qabashada xafiisyada ugu sareeya ee dowlada Puntland.
Musharixiinta horey u sheegay in ay ka qeybgalayaan doorashada dhacaysa 8 Janaayo ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku dhawaaqayay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada xili ay barbar socotay diiwaan gelinta musharixiinta.
Si kastaba ha ahaatee doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa Puntland ayaa la filayaa in ay dhacdo maalinta Talaadada ah ee soo socota iyadoona ay si dardar leh u socdaan ololaha musharaxiinta Puntland ay ugu jiraan ku guuleysiga kuraasta ugu sareysa ee looga arimiyo Puntland.